Indoda 'igwaze yabulala' indodana (9) yazilengisa - Ilanga News
Home Izindaba Indoda ‘igwaze yabulala’ indodana (9) yazilengisa
Indoda ‘igwaze yabulala’ indodana (9) yazilengisa
Unina wengane usola ingcindezi yokuphelelwa umsebenzi esokeni lakhe
uNkz Mbalenhle Mfolozi ongunina wengane ebulewe, uSamkelo Mfolozi (9).
KUBATSHAZWAisihlu-ku indoda igwaza ibulala indodana yayo eneminyaka ewu-9 ubudala maqede yazilengisa, yangabhala ngisho incwadi echaza ngesizathu sokugila le mihlola.
Kubikwa ukuthi batholakale ngemuva kwezinsuku ezintathu sebethule uMnu Sibusiso Ndwalane (34) nendodana yakhe, uSamkelo Mfolozi (9) obefunda uGrade 5 eSiphingo Primary School. Batholwe emzini kaMnu Ndwalane okwa-CC, eMlazi.
UMnu Ndwalale ungowase-
Mthwalume kodwa ubesehlala eMlazi ngenxa yomsebenzi.Ngokuthola kweLANGA ngonina wengane uNkz Mbalenhle Mfolozi (27), okunguyena ofike kuqala endaweni yesigameko, lesi sehla-kalo senzeke engekho eThekwini, njengoba ehlala eHarding ngoko-msebenzi.
Uthi kuphoqeleke ukuba ashiye konke abekwenza eHarding ngesikhathi sekuphele izinsuku engamtholi uyise wengane yakhe ocingweni.
“Ngithole ukuthi ufike ekhaya ngoMsombuluko ntambama kukhona umfowethu, wacela indodana yethu ukuba ayoyisiza ngomsebe-nzi wesikole, okuyinto abejwayele ukuyenza, ukuyilanda ekhaya ayohlala nayo kwakhe.
“Ngimshayele ucingo ngoMso-mbuluko wangalubamba ngemuva kokuba bengitshele ukuthi uhambe nendodana yethu. Kangi-zange nginake ukuthi kukhona okushaya amanzi emuva kokumfo-nela okokuqala engalubambi.
“Ngiqale ukwethuka ngoLwesi-thathu uma bengifonela ekhaya, bethi akayibuyisanga ingane ngoMsombuluko, okwenze yangaya nasesikoleni ngoLwesithathu. Ngimshayele kaningi ucingo lu-ngaphendulwa,” kusho uNkz Mfolozi.
Uthi esesola ukuthi kukhona okungahambi kahle, uqonde eThekwini ngalo uLwesithathu. Uthi okumenze wasola kakhulu ukuthi kungenzeka ukuthi bane-nkinga wukungalubambi kwesoka lakhe ucingo izinsuku zilandelana, futhi lingaluphenduli.
“Ngifike endlini yakhe kukhiyiwe ngangqongqoza. Kakuphendu-langa muntu ngabe sengiyobuza komakhelwane, ngacela ukuba bangisize sigqekeze endlini yakhe sibheke khona.
“Singene endlini sa-mfica ezile-ngisile indodana yethu ilele
inenxeba lokugwazwa emqaleni,” kusho uNkz Mfolozi.
Uthi umufi ubeyithanda kakhulu indodana yabo, kungu-kuphela kwayo. Uthi bebengahlukani, ubetha-nda ukuchitha isikhathi sakhe esini-ngi nayo.
Uthi yize engabhalanga ncwadi echazayo ngokuzibulala kwakhe
nendodana yabo, kodwa into abeyazi wukuthi kayimphethe kahle eyokulahleke-lwa wumsebenzi owamphelela. Uthi bese kunezinyanga ehleli ekhaya. “Ngokwazi kwami ibisakhona imali eyaphuma emsebenzini wakhe, ubengakabi nayo inkinga yemali ebisingamenza aqede ngempilo yakhe. Nami ngiyasebe-nza indodana yethu ibingeke iswele ukuthi ubesengaze athathe isinqumo sokuzibulala,” kusho uNkz Mfolozi.
UNkz Mfolozi utshele ILANGA ukuthi uyise wengane yakhe uzi-bulala nje, ubudlelwano babo bebuhamba kahle, bengenazo izinkinga futhi bebengakaze baxabane.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbele, usiqinisekisile lesi siga-meko. Uthe amaphoyisa avule idokodo lophenyo ngokuthola-
Previous articleuMasipala nabaculi bapiklelane kungcwatshwa umajotha
Next articleKuboshwe umngcwabi ‘ontshontshe’ ibhokisi
26 JUNE 2022 25th Jun 2022